ममताको 'टेन्सन जय श्री राम' - खबरम्यागजिन
Homeखबरममताको ‘टेन्सन जय श्री राम’
ममताको ‘टेन्सन जय श्री राम’
पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई कसैले जय श्री राम भन्यो कि आफूलाई गालीगरेजस्तो लाग्न थालेको छ। यतिखेर ममता व्यानर्जीको सातो कसैले लगेको छ भने त्यो यही नारा हो, जो अहिले भाजपा समर्थकहरूले जताततै फलाक्दै हिँड्छन्। जब व्यानर्जी
‘जय श्री राम’ भनेको कतै सुन्छिन् उनले आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न नै सक्दिनन् । हिजो त उनले आफ्नो रिसको पराकाष्ठा नै प्रदर्शन गरिन्, यसै महिनामा भएको यो दोस्रो घटना हो ।
गाडीबाट जाँदै गर्दा एउटा समूहले बाटोमा ‘जय श्री राम’ को नारा घन्कायो । ममता गाडीबाट ओर्लिन् र त्यो समूहलाई ‘नारा बन्द गर’ भन्दै बेस्मारी हकारिन् । घटना यत्तिकैमा टुङ्गिएन । जब उनी फर्केर गाडीमा उक्लिइन्, उक्त समूहले फेरि ‘जय श्री राम’ को नारा घन्काउन थाल्यो।
त्यसपछि व्यानर्जीले उनीहरुलाई ‘अपराधी’, ‘बाहिरिया’ भन्दै गाली गरिन् । त्यतिमात्र नभएर मिथुन चक्रवर्ती अभिनित फिल्म ‘एमएलए फाटाकेष्टो’ को संवाद सापटी लिँदै भनिन्, ‘म तिमीहरू सबलाई चिन्दछु । म तिमीहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छु । यदि मैले यहाँ तिमीहरूलाई कुटें भने मिथुन चक्रवर्तीको डायलग थाहा छ नि ? म मिथुनलेझैं त भन्न सक्दिनँ, लाशको कुरा पनि नगरौ । तर म यहाँ तिमीहरुलाई कुट्छु र न्याय अन्तै कतै पाउनेछौ ।’
हिजो र उनले जय श्री राम भन्नेहरूलाई अनुप्रवेशकारीसमेत भन्न भ्याइन्। मोदी सुनामीको लपेटामा कोही परेकी छन् भने उनी ममता व्यानर्जी नै हुन्। जसले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पालेर बसेकी छन्। तर उनको सपनामा मोदीले पानी खन्याइदिए। बङ्गालको हिंसामा मरेका परिवारका सदस्यहरूलाई मोदीले शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निम्त्याएकोमा सातो गएको ममताले हिजो आफ्नो सारा रिस् जय श्री राम भन्नेहरूमाथि खन्याइन्। मानिसहरू भन्न थालेका छन्, ‘यो दिदीगिरी हो कि दादागिरी?
मुकुल रोयसित भयो टेलिफोनमा कुरा : राजेन मुखिया भाजपामा जाने सम्भावना
आशा भोसलेले यसरी मनपराइन् स्मृति